Motor Show and Event – AutoMyanmar
Posts tagged with: Motor Show and Event
Premium ကားကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Volvo ဟာတော့ လက်ရှိ Los Angeles မှာ ကျင်းပနေဆဲဖြစ်တဲ့ Automobility LA conference ကို ကားမော်ဒယ်အသစ်တစ်စီးမှ မိတ်ဆက်မှုမရှိ၊ ကားတစ်စီးမှသယ်ဆောင်လာမှု မရှိပဲ တက်ရောက်လျက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Auto Conference တစ်ခုကို ကားတစ်စီးမှယူဆောင်လာခြင်းမရှိပဲ တက်ရောက်မှုဖြစ်ရပ်ဟာ ဒါပထမဉီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့လဲသိရပါတယ်။ ဆိုတော့ Volvo အနေနဲ့ Automobility LA conference ကိုကားတစ်စီးမှ ယူဆောင်လာမှုမရှိပဲ ဘာအကြောင်းကြောင့်တက်ရောက်လာတာလဲ? Volvo ဒီ conference ကို ကားတစ်စီးမှမယူဆောင်လာပေမယ့် သူ့တို့ကုမ္ပဏီရဲ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်၊ ဘယ်လိုပြုပြင်မှုတွေလုပ်ပြီးကားတွေကို ထုတ်လုပ်သွားမယ် စတဲ့အချက်တွေကို ချပြဖို့ အစီအစဉ်ကြောင့် conference ကိုတက်ရောက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Motor Show တွေမှာဆိုရင် အဓိကအချက်က စင်မြင့်ပေါ်မှာ ကားမော်ဒယ်အသစ်တစ်ခုကို Silk Sheet […]
မကြာခင်ကျင်းပသွားမယ့် CarsDB Auto Show 2018 အကြောင်းသိပြီးကြပြီလား?
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံး ကားပြပွဲကြီးတစ်ခုလို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ CarsDB Auto Show Yangon 2018 ဟာတော့ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက် (စနေနေ့) ကနေ ၁၉ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) အထိ သံသုမာလမ်း၊ Thuwunnabhumi Event Park မှာ နံနက် ၁၀ နာရီကနေ ည ၉ နာရီအထိကျင်းပသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Autoshow မှာဆိုရင် GAC, Toyota, Nissan, Mercedes-Benz, Volvo, Mazda တို့အပြင် တခြား Automaker များစွာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲကာလ အတွင်း ကားအမျိုးအစားစုံစုံလင်လင်နဲ့ Brand new ကားအသစ်ကြီးတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်သလို Test Drive အစီအစဉ်တွေကိုပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ပြီး Automaker တွေရဲ့အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်တွေကို ခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အာမခံတွေကိုလည်း တစ်နေရာတည်းမှာ […]
လာမယ့် စနေနေ့မှာကျင်းပသွားဖို့ရှိနေတဲ့ Kia ရဲ့ “Best Yet Sales” event
Novotel မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ့် Most Amazing VIP Private & Automobile Sales Expo မှာ Kia ကလည်း “Best Yet Sales” event တစ်ခုကို ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Event ကိုတော့ လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ကနေ ၃၀ ရက်နေ့အထိ နံနက် ၉ နာရီကနေ ညနေ ၆ နာရီအထိ Novotel Yangon Max မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Event မှာဆိုရင် နောက်ဆုံးပေါ်လူကြိုက်များ Luxury Option တွေဖြစ်တဲ့ Wireless Charger, Smart power tailgate, Panorama Sunroof နဲ့ Safety System အတွက် Air […]
GAC Motor ကတော့ မန္တလေးမှာရှိနေတဲ့ ကားချစ်သူတွေအတွက် GAC Motor Mandalay Roadshow ကို ဒီနေ့ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှာစတင်ပြီး ၁၂ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နံနက် ၉ နာရီကနေ ည ၉ နာရီအထိ ရတနာပုံစျေးအနီးမှာရှိနေတဲ့ Skywalk Shopping Mall မှာကျင်းပလျက်ရှိနေတာပါ။ Roadshow မှာဆိုရင်တော့ GAC Motor မှ GA4 Sedan 1.3T, GS3 SUV 1.3T, GS4 SUV 1.5T, GS5 Super SUV 1.8T, GS7 SUV 2.0T, GS8 2.0T, GM8 MPV 2.0T အစရှိတဲ့ […]
လာမယ့်ရက်အနည်းအငယ်မှာ ကျင်းပသွားဖို့ရှိနေတဲ့ CarsDB Luxury Auto Show 2018
CarsDB ကကြီးမှူးပြီး CarsDB Luxury Auto Show 2018 ကိုတော့ လာမယ့် သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ကစတင်ပြီး ၂၆ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ Novotel Yangon Max မှာ နံနက် ၁၀ နာရီကနေ ည ၈ နာရီအထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ လဲသိရပါတယ်။ ပွဲမှာဆိုရင်တော့ မတူညီတဲ့ Luxury ကားအမျိုးအစားများစွာကို ချပြသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် ကားဝယ်ယူလိုသူတွေနဲ့ ကားဝါသနာရှင်တွေ အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲတစ်ခုဖြစ်နေမှာပါ။ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက CarsDB Luxury Auto Show 2018 မှာပါဝင်တဲ့ Test Drive အစီအစဉ်ပါပဲ။ Mercedes-Benz Myanmar မှ Mercedes-Benz GLC, Mercedes-Benz GLE, Mercedes-Benz GLS Jaguar မှာ Jaguar E-Pace […]
RUSH ဆိုတဲ့ကားအသစ်ကြီးကို မိတ်ဆက်သွားဖို့ရှိနေတဲ့ Toyota Myanmar
RUSH ဆိုတဲ့ကားမော်ဒယ်အသစ်ကြီးကိုတော့ Toyota Myanmar – Aye and Sons ကကြီးမှူးပြီးပြုလုပ်မယ့် “Toyota all new SUV Rush Launching” ဆိုတဲ့ Event တစ်ခုမှာ ချပြမိတ်ဆက်သွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Event ကိုတော့လာမယ့် ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့၊ ၃၀ ရက်နေ့နဲ့ ဇွန်လိုင်လ ၁ ရက်နေ့ ဆိုပြီး ၃ ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပသွားမှာပါ။ မြန်မာပလာဇာ Promotion Area မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး ကျင်းပချိန်ကတော့ နံနက် ၁၀ နာရီကနေ ည ၈ နာရီအထိဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ RUSH မော်ဒယ်အသစ်ဟာတော့4Wheel Drive Mid-size SUV အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး 1.5L 2NR-VE 4Cylindar […]
local, Motor Show and Event, Toyota
Mandalay Special Promotion ဆိုတဲ့ event တစ်ခုကိုကျင်းပသွားဖို့ရှိနေတဲ့ Peugeot Myanmar
Peugeot Myanmar ကတော့ ဉပရောမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့ Brand New Peugeot ကားတွေကို Promotion အစီအစဉ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ချပြရောင်းချသွားဖို့အတွက် “Mandalay Special Promotion” ဆိုတဲ့ Event တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ကနေ ၁၁ ရက်နေ့အထိ ၃ ရက်တိုင်တိုင် မန္တလေးက City Hall မှာကျင်းပသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျင်းပမယ့်အချိန်ကတော့ နံနက် ၉ နာရီကနေ ည ၉ နာရီအထိပါ။ သောကြာ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ဖြစ်တာကြောင့် တော်တော်များများသွားရတာအဆင်ပြေလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Promotion event မှာဆိုရင် SUV, Sedan, Saloon, Hatchback အစရှိတဲ့ Brand New ကားအမျိုးအစားတွေကို ချပြရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီး လပေါင်း (၆၀) အတိုးနှုန်း […]
local, Motor Show and Event, Peugeot